मंगल ग्रहबाट पहिलो एचडी तस्बिर सार्वजनिक « LiveMandu
१५ फाल्गुन २०७७, शनिबार १५:०३
किन भेटे ओलीले विप्ललाई
युवा र बालबालिकामा संक्रमण र मृत्यदर बढ्यो, यी
'निपा’ भाइरस : अर्को महामारीको खतरा !
अध्ययन भन्छ- डबल मास्क बढी प्रभावकारी
फेरि बढ्यो हवाई भाडा, कुन गन्तव्यमा कति ?
सीएनएन । गएको बिहीबार मंगल ग्रहमा अवतरण गरेको नासाको ‘प्रिजरभरेन्स रोभर’ले नयाँ तस्बिरहरु पठाइरहेको छ । जसले पृथ्वीबाहिर अर्को ग्रहका रोचक दृश्य र वातावरणको प्रत्यक्ष अनुभव गराइरहेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
उक्त यानमा जडान गरिएको जुम गर्न मिल्ने कलर क्यामेरा, ‘मास्टक्याम–जी’ उपकरणले अवतरण भएको क्षेत्रबाट १४२ वटा तस्बिर पठाएको छ । तिनै तस्बिरहरुलाई मिलाएर नासाले ३६० डिग्रीको पहिलो प्यारानोमा बनाएको छ ।
यो पहिलो एचडी (हाइ डेफिनेसन) तस्बिरमा ‘जेजेरो क्रेटर’लाई स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ, जुन ३.९ अर्ब वर्ष पुरानो सुकेको ताल भएको क्षेत्र हो । नासाको यानले त्यहीँ आफ्नो अध्ययन र रिसर्च सञ्चालन गर्नेछ । यसमा आगामी दुई वर्षसम्म प्राचीन जीवनको संकेत खोजी गरिनेछ ।
सार्वजनिक तस्बिरमा क्रेटर रिम, प्राचीन नदि डेल्टा अनि चट्टान केही दूरीमा देख्न सकिन्छ । सो तस्बिर नासाका अन्य यानले विगतमा पठाएकोभन्दा धेरै फरक भएको बताइएको छ । मास्टक्याम–जीका प्रमुख खोजकर्ता जिम बेल भन्छन्, “हामीले अहिले एकदमै राम्रो ठाउँमा बस्न पाएका छौँ । जहाँबाट विविध विशेषताहरु देख्न सकिन्छ । र, तिनीहरु ‘स्पिरिट’, ‘अपरचुनिटी’ र ‘क्युरिओसिटी’ यानका अवतरण क्षेत्रसँग धेरै तरिकाले समान पनि छन् ।”
प्रिजरभरेन्स रोभरले नेभिगेसन क्यामेराको प्रयोग गरी प्यारानोमा तस्बिर पनि पठाएको छ । यसमा जडान दुईवटा क्यामेरा एचडी फिचरयुक्त रहेका छन् । ती क्यामेरा ६ फिट अग्लो मान्छेको आँखाको स्तरमा रहेका छन् र ९.५ इन्च टाढाको दूरीमा छन् । यसले नै रोभरलाई विस्तृत दृश्य लिनमा मद्दत गरिरहेको छ । मास्टक्याम–जीले सिर्जना गर्ने कलर तस्बिरको गुणस्तर हाम्रो डिजिटल एचडी क्यामेराजस्तै अपेक्षा गर्न सकिने नासाका अधिकारीले बताए ।
ती क्यामेराले जुम गर्ने मात्र होइन, फोकस गरेर भिडियो खिच्नुका साथै प्यारानोमा र थ्रीडी तस्बिर पनि लिन सक्छन् । यसले मिसनको टिममा हुने वैज्ञानिकहरुलाई नजिक र टाढा दुवैतर्फका वस्तुहरुको जाँच गर्ने अवसर दिलाएको छ । यसको प्यारानोमामा ०.१ देखि ०.२ इन्च सानोसम्मका वस्तुहरु विस्तृतमा देख्न सकिन्छ । त्यस्तै, ६.५ देखि १० फिट टाढा पनि राम्ररी देखिन्छ । यी क्षमताको लक्ष्य भनेको सो भूगोलको इतिहास बुझ्न र रोभरका अन्य उपकरणहरुले अध्ययन गर्नुपर्ने ढुंगा र चट्टानहरुको पहिचान गर्नु रहेको छ ।
यसमार्फत् वैज्ञानिकहरुले संकलन गरी पृथ्वीमा ल्याउनुपर्ने ढुंगाहरु पनि निर्धारित गर्न सक्नेछन् । नासाले रोभरबाट प्राप्त थप तस्बिरहरु आफ्नो वेबसाइट र मिडिया अकाउन्टमा निरन्तर पोस्ट गर्ने बताएको छ ।
सदनबाट नयाँ कोरोना नियम पारित भएपछि जर्मनीमा कर्फ्युसहितको लकडाउन
जर्मनी। जर्मनीमा कोरोना भाइरस संक्रमणले डरलाग्दो रुप लिएपछि बुधबार संसदले कोरोना सम्बन्धी नयाँ स्वास्थ्य नियम पारित गरेको छ। करिब दुइ
काठमाडौं। चीनमा एक २८ वर्षीय युवक भाइरल भइरहेका छन्। वास्तवमा झङ कुनवेइ नामका यी व्यक्तिले एउटा लेख लेखेका छन् जसमा
नासाले उडायाे मंगल ग्रहमा हेलिकाेप्टर
एजेन्सी । अमेरिकी अंतरिक्ष एजेन्सि नासाले मंगल ग्रहमा एउटा सानाे हेलिकाेप्टरकाे सफल उड़ान गरेकाे छ । इनजेनिटी नामकाे उक्त ड्रोन
भारतमा कोरोनाविरुद्धको खाेप कोभिसिल्डकाे मूल्य ६००
काठमाडाैं- भारतको सबैभन्दा ठूलो खोप निर्माता सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया (एसआइआइ)ले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र बेलायती औषधि निर्माता कम्पनी एस्ट्राजेनेकासँग मिलेर